Foto 3D kacha amasị anyị na Facebook - LucidPix
Foto 3D kacha amasị anyị na Facebook
Ọ bụghị ihe ịtụnanya, anyị bu nnukwu Fans nke Foto 3D na Facebook. Ihe e cheburu gimmick, na-eto ka ukwuu karịa. Dika anyi choputara site na nzipu ozi nke otu anyi, na ilele ihe sitere na ndi okike 3D Photo, ha abughi ihe obi uto ile anya na iso ya meko ihe, ha na aru oru di egwu nke iwebata ihe ndi ozo, ihe ha na ekwuputa karia foto mgbe nile.
Ikekwe otu akụkụ kachasị amasị anyị nke foto 3D bụ na ha na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ọnọdụ dị iche iche. Ọ bụghị naanị ha nwere ihe ọdịmma onwe ha ma ọ bụ foto nri ụtọ; foto ndị a na-eme ka omimi dị omimi mara mma maka ihe ọchị, nka ọma, ọdịdị ala, foto anụ ahụ, mem, na ọtụtụ isiokwu ndị ọzọ. Ha zuru ụwa ọnụ na ikike ha ịmegharị ihe nkịtị ka ọ bụrụ ihe pụrụ iche.
Biko rụba ama:
Maka ndị nke gị na ekwentị, hụ na imepe ederede Facebook na ngwa Facebook iji hụ ha n'ebube 3D ha!
Maka ndị nke gị na desktọpụ kọmputa gị ma ọ bụ na laptọọpụ laptop gị, ị nwere ike ịmegharị òké gị mgbe ị na-achọgharị n’elu ihe oyiyi ahụ ka ị hụ mmetụta 3D. Agbanyeghị, ikiri ihuenyo 3D foto a zuru oke na-eme ka ha ka mma. Iji mee nke a, pịa ụbọchị / oge dị n'okpuru aha onye edemede posts wee pịa na 3D Photo iji mee ka ihuenyo zuru oke.
Foto 3D kacha amasị # 1: nne nne na nna
Anyị hụrụ foto 3D a n'anya n'ihi ọtụtụ ihe; ihe mbu bu na o bu ihe itiri egwu. Anyị niile nwere ike ịkọ banyere isi nri mama m na-ahụ n'anya, yana nzuzu nke ịkpọ ụbọchi bọọdụ. Na mmechi, anyị hụrụ n'anya na ihe emere ka ọ bụrụ 2D nwere ike gbanwee 3D ka nke ọma.
Foto 3D kacha amasị # 2: Nkịta Dog Anya
Onweghị ihe dị ka ụmụ nkịta nwere ike isi nye gị mgbe ha chọrọ ihe. Nchikota nke nnukwu anya ha, nti uto, na ebe ha na-emechi ha ezuola ime ka obuna obi oyi diri ma gbazee, “awwww!” Anya ndị a dị mma karịa na 3D, ebe anya na-eso gị gburugburu, n'agbanyeghị ebe ị kwụ karịa. Nwetụla mgbe ị na-eche ihe mere anyị ji achọpụta pịpị a. Ikekwe ọ bụ n'ihi ha bidoro mara mma n'ihi ya, ụmụ mmadụ ga-anabata ha ma mee ka ha bụrụ akụkụ nke ezinụlọ anyị.
Foto 3D kacha amasị # 3: Anyanwụ Anyanwụ
Onweghi ihe dị ka ọdịda anyanwụ dara. Thinkfọdụ chere lovehụnanya anyị nwere maka ọdịda anyanwụ mara mma na-agbadokarị okwu oge ochie nke, “Red Sky Night, Night Sailor, Del Sky In the ụtụtụ, Ndị Ọkwọ ụgbọ mmiri na-adọ aka na ntị,” na ọdịda anyanwụ na-acha uhie uhie na-ebu amụma amụma ihu igwe n'echi ya. . Ihe ọ bụla kpatara ya, anyị hụrụ foto a n'anya Arpan Das. Mgbe a gbanwere 3D, ọ na - enyere aka “bute gị ebe ahụ,” na - enyere gị aka inwe mmetụta dịka ị na - ahụ ọdịda anyanwụ maka onwe gị.
Foto 3D kacha amasị # 4: Agba mgbe mmiri zochara
Ezigbo okike yiri ka ọ bụ ọpụrụiche nke Mkparịta ụka foto 3D nke LucidPix. Ebe ọ bụ na art anaghị agbaso iwu nke ụwa n'ezie, ị maghị nke ọma ihe ị ga - enweta mgbe ị na - agba ọsọ nka site na ngwa ngbanwe anyị. Injin AI anyị mepụtara iji chọpụta ịdị omimi na onyonyo, na-ejighi ọnọdụ eserese ma ọ bụ igwefoto igwe ojii, na-eji mmụta ụwa. Nyere ihe onyonyo dika nke di n’elu, ọgụgụ isi di na LucidPix n’ewetara ihe osise ahu na ndu, na enyere gi aka banye n'ime nke a mee ụwa kwere, dịka Mary Poppins na Bert na-eme na fim nke akpọrọ onwe ya.
Foto 3D kacha amasị # 5: Nenye Na-achọ Aka?
Ka anyị ghara ichefu banyere foto! Foto 3D 2D bụ ụzọ zuru oke iji were foto gị ọzọ gaa ọkwa ọzọ. Were, dịka ọmụmaatụ, nwaada nwanyị na-eguzo na aka ya na-achọ ụta na akụ. Na 3D, ọ bụ foto dị mma, bara uru ngwa ngwa, mana ọ nweghị ihe ọzọ. Mgbe etinyere ya XNUMXD, o na-ebi ndu ohuru. Knowmara na ibugharị ekwentị gị ma ọ bụ òké gburugburu ya iji nyere ya aka imezu!
Foto 3D kachasị amasị 6: Seurat's Sọnde na La Grande Jatte
Nnukwu ngbanwe #D abụghị nanị n’ihe osise eserese. Eserese nke Seurat, E mere site na nde bekee, na-ele anya nke ọma karịa na ụzọ atọ agbakwunyere. Eleghi anya akụkụ kachasị amasị anyị na eserese a, ewezuga ya ọ nwere njirimara dị ịtụnanya, bụ ihe a na-eme site na ụbọchị Ferris Bueller Off ebe Cameron kpọchiri obere nwatakịrị nwanyị na eserese ahụ.
Ihe nkiri a na-ahọrọ. Ọ bụrụ na ịhụbeghị ya, m na-akwado ya nke ukwuu.
Foto 3D kachasị amasị 7: Dubrovnik's Old Town
Otu njiri mara nke Facebook 3D Foto bụ ike ha maka iweta ihe nlere na ndụ. Kama ilele ebe a ka onye na-ese foto hụrụ ya, foto ndị a na-ewuli elu, nyere gị aka n’ezie ka ị na-ahụ ebe a. Mmetụta “ịnọ ebe ahụ” nwere ike sie ike, anyị na-atụle ụfọdụ foto 3D nwere ike Telepresence.
Foto 3D kacha amasị # 8: Memes
Dị ka onye ọ bụla maara, memes agafela niche gaa na a ihe uwa nile. Onye obula, malite na ndi Joes, rue ndi kachasi elu nke uwa na-eji memes ubochi obula, LucidPix anoghi na omume. Na onyonyo nke dị n’elu, anyị jiri Dolly Parton si profaịlụ di egwu meme ma gosipụta ihe na-eme ka LucidPix dị iche na ndị ọzọ.
Foto dị mma # 9: Llọ Fallingwater Frank Lloyd Wright
Frank Lloyd Wright, nke a na-ewerekarị dị ka otu n'ime ụlọ ndị mara mma America, kwenyere na ya na -ewupụta ụlọ kwekọrọ na mmadụ na gburugburu ya. Enwere ike ikwenye nkwenye a na ihe okike ya akpọrọ Fallingwater. Homelọ a, etinyere n'ọhịa nke Bear Run, Pennsylvania, wetara n'èzí n'ime ya na osisi toro eto agbakọtara n'ime ụlọ iri nri na ebe obibi, yana iyi na-agba agba n'agbanyeghị ụlọ ahụ. Short nke ileta ha ulo n'onwe ya, nke anyị na-akwado gị ka ị gbakwunye na bọket gị, ị na-elele ya na 3D na-arụ ọrụ dị ukwuu nke inyere gị aka ịhụ ụlọ ahụ na onwe gị.
Foto 3D kacha amasị # 10: Kedu maka nri abalị?
Na LucidPix, anyị bụ nnukwu ndị na-ese foto. Anyị ghọtara nke ahụ Nri mara mma. Ma ọ bụ sọks ofe Pizza dị ụtọ ma ọ bụ deconstructed akwa mpịakọta, iwere ma na-ekerịta foto nri gị na 3D na-eme ka ha nwekwuo agụụ.
Ọdịiche dị n'etiti foto 2D oge ezumike na 3D Photo →← Etu esi ede 3D XNUMXD foto